Fanafihana tampoka nataon'i Hawaii sy China an'i Hawaii, ny fikorontanana tao Eswatini dia nanoratra an'i Taiwan tao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Fanafihana tampoka nataon'i Hawaii sy China an'i Hawaii, ny fikorontanana tao Eswatini dia nanoratra an'i Taiwan tao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao Mafana Taiwan • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Russia China Resaka nokleary
Ny fitakiana an'i Shina momba an'i Taiwan dia toa nanjary fandrahonana manerantany. Fanazaran-tafika 200 kilaometatra miala ny morontsirak'i Hawaii, tompon'andraikitra japoney iray mampitandrina an'i Etazonia amin'ny fanafihana ataon'i China sy Russia, fikasana hanongana ny governemanta ao amin'ny fanjakan'ny Eswatini, dia mety misy ifandraisany tokoa.
Mandrahona an'i Hawaii ve ny mety hisian'ny fanafihana tampoka ataon'i Russia sy China an'i Taiwan?
Ao anaty korontana ny fanjakan'i Eswatini taorian'ny fikomiana andian'olona mpikomy vahiny hanongana ny fanjakana. Mety misy ifandraisany amin'ny adin'i China sy Taiwan ihany koa io
Nihazona fifandraisana sariaka i Etazonia ary nanome fitaovam-piadiana hanampiana an'i Taiwan. Eswatini no firenena afrikana tokana manana fifandraisana diplomatika amin'i Taiwan. Tsy nahagaga raha nanangana masoivoho goavambe i Etazonia tao amin'ity fanjakana kely misy olona latsaky ny 2 tapitrisa ity.
Roa herinandro lasa izay Fiaramanidina mpiady amerikana Raptor voatery niainga mba hifehezana fampiharana Rosiana any amin'ny rano akaikin'ny US Pacific State of Hawaii.
"Tsy maintsy asehontsika ny fanakanana an'i Shina, fa tsy ny any Shina ihany fa ny an'ny Rosiana ihany koa, satria, araka ny nolazaiko taminao, fa miara-manao ny fanazaran-dry zareo izy ireo," hoy ny depiote japoney misahana ny fiarovana Yasuhide Nakayamataloha ny Hudson Institute ity herinandro ity.
Raha mijery ny vaovao avy any Zvezda ianao, izay tatitra rosiana, ny vaovao avy amin'ny tafika rosiana, dia tena manatanteraka eo imason'i Honolulu tokoa izy ireo izao.
Ary misy sambo mpiady, sambo mpisitrika nokleary ary fiaramanidina lehibe. Ary tena manao fanazaran-tena eo anoloan'ny ilany andrefan'i Honolulu izy ireo.
Tsy te hampahatsiahy aho 70 taona lasa izay dia nanafika tampoka i Pearl Harbor. Mila mitandrina isika amin'ny iraka fampiofanana miaramila ataon'ny Rosiana.
Tsy kisendrasendra izany, ny Rosiana no nifidy ny toerana, ny ilany andrefan'i Honolulu, Hawaii. Any Hawaii, misy ny fiaramanidina fahafito any Etazonia ary koa ny PACOM dia manana foibe any Hawaii.
Misy sambo mpitsikilo rosiana miantsona eo avaratr'i Oahu, Hawaii, araka ny tatitra navoakan'ity fanontana ity.
Ny White House, ny governemanta amerikana dia naneho hevitra momba an'i Hong Kong ihany koa.
Ny fahalemen'ny Taiwan amin'ny fanafihana avy any amin'ny tanibe Shina dia nanjary mpibodo ny tetikady Indo-Pasifika tato anatin'ny volana vitsivitsy, noho ny fampiakaran'ny tafika kaominista sinoa ny fanazaran-tafika azy ireo manerana ny nosy. Nakayama, izay nilaza mazava momba ny filàn'ny firenena demokratika mba hiantohana ny fahaveloman'ny Taiwan, dia nilaza fa mpiara-miasa i Russia sy China hiomana amin'ny fifanolanana lehibe amin'ny Etazonia.
Tena mampiahiahy ireo Taiwanese. Izy ireo dia mifantoka amin'ireo firenena roa lehibe miara-miasa sy [maneho] loza mitatao amin'i Taiwan. ”
Ny tompon'andraikitra kominista sinoa dia mihevitra an'i Taiwan ho toy ny faritany iray niodina, iray izay efa namboarin'izy ireo hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 1949 fa tsy nifehy mihitsy. Ny ankamaroan'ny firenena dia manaiky ny fitondrana any Beijing ho governemanta ofisialy sinoa ary tsy manana fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Taiwan, na dia nifandray am-pirahalahiana aza i Etazonia ary nanome fitaovam-piadiana hanampiana ireo manampahefana Taiwaney hanakana ny fanafihana avy amin'ny tanibe.
"Tsy maintsy arovantsika i Taiwan amin'ny maha firenena demokratika antsika," hoy ny Minisitra lefitra misahana ny fiarovana ao Japan Nakayama.
Mety ho izany indrindra no antony any an-dafin'ny tany, ao amin'ny fanjakana kelin'i Eswatini misy olona 1.3 tapitrisa, i Etazonia dia iray amin'ireo masoivoho lehibe indrindra eto an-tany.
Eswatini no firenena tokana eto Afrika manaiky an'i Taiwan ho firenena. Toa liana amin'ity raharaha ity i Etazonia. Tezitra i Sina ary angamba ao ambadiky ny fikorontanana sy fanonganana amin'izao fotoana izao any Eswatini. Walter Mzembi izay minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha, Walter Mzembi eTurboNews tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe: Tratra teo anelanelan'i Sina sy Taiwan i Eswatini.
Ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny sinoa Wang Wenbine dia namaritra ny fanambarana Japoney momba ny fanafihana mety hitranga any Hawaii ho mampidi-doza ary koa nanafintohina tany Japon niantso an'i Taiwan firenena. Hoy izy: “Mangataka amin'i Japon izahay mba hanazava fa tsy firenena i Taiwan, ary hiantoka ny tsy hisian'ny zavatra toy izany intsony.”
Nasongadin'i Nakayama fa ny fihenjanana any amin'ny faritr'i Indo-Pacific dia misy ifandraisany mivantana amin'ny filaminan'ny Amerikanina, indrindra eo amin'ny fifandrindran'i Shina sy Russia. Nentiny nody ilay teboka tamin'ny fampatsiahivana ny fanafihana tampoka nataon'ny Japoney tany Pearl Harbor 70 taona lasa izay, izay nahatezitra ny fidiran'ny tafika amerikana tamin'ny Ady lehibe faharoa.
Nofaritan'ny tompon'andraikitra rosiana ho toy ny fanamarinana fitaovana ny «fandefasana balafomanga sy ny basy» any Pasifika. Ho an'i Nakayama, ny asa toy izany dia manazava fa i Japon sy i Etazonia dia manana olana iraisana izay mila mijanona miaraka.
Ny mpitarika amerikana sy japoney dia nilaza fa hanamafy ny fitaovan'izy ireo hiadiana amin'ny fandrahonana avy any Sina sy Korea avaratra, ao anatin'izany ny fihetsika mahery setra any Beijing mankany Taiwan, satria ny governemanta Biden dia manandrana mametraka eo amin'ny faritra.